Mahadum sayensị na teknụzụ nke China (ustc) amụbawo ụdị ihe ọkụkụ na -emepụta biomimetic, ike di elu na ike nano cellulose - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Mahadum sayensị na teknụzụ nke China (ustc) amụbawo ụdị ihe ọkụkụ na -emepụta biomimetic, ike di elu na ike nano cellulose
Kemgbe amuru mmepeanya nke mmadu, ihe abụrụla ihe ndabere nke mmepe mmekọrịta ọha na eze na ọganiru. Ihe eji eme ulo dika ọla, ceramik na polymer bụ ihe akachasị eji. N'afọ adịbeghị anya, mmepe nke ihe ndi di elu na nnabata (dika ike na ike), ọkachasị ihe ndị eji ewu ụlọ dabere na ọkwa nke nanometer, emeela ka nleba anya karia.
na nso nso, ndi otu akwukwo mahadum yu shuhong si na ulo akwukwo nke sayensi na teknụzụ nke China eweputala ihe omumu ihe omuma banyere biomlotiiki di elu. (CNFP). Ihe a nwere ezigbo ihe omuma, ịdị ukwuu ya bụ naanị ụzọ n'ụzọ isii nke nke ígwè, ike a kapịrị ọnụ, akachasị esiri ike karịa ihe ndị ọdịnala ochie, ceramik na plastik injin.
Cellulose bụ otu n'ime ihe ndị bara ụba na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ n'ụwa. Cotton, hemp, straw, ahihia, bagasse, wdg, enwere ike inye sel ọ bụla. Ya mere, ọtụtụ ihe ndị sitere n'okike na-atọ ntọala siri ike maka ihe a.
E bipụtara nsonaazụ ya na Mee 1 ke akwụkwọ akụkọ Science Advances (Science ọganihu 2020) dị ka "Dị fechaa, siri ike, na oru ihe eji eme otutu cellulose na –eme ka ihe ngbali okpomoku di ala." 6, eaaz1114).
Achọpụtara ya na dị fechaa, ike dị elu na ihe siri ike nke CNFP bụ nke sitere na imewe nke ihe eji emepụta micron-scale na network nanomita akụkụ atọ.. Elu ala nke na-ahụ klọọkụ dị n'ime nwere ike inye nnukwu ume dị egwu, site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke njikọta hydrogen n'etiti eriri ndị ahụ dị ka netwọọdụ njikọta ọnyagharị, n'okpuru ike mpụ na nnukwu njupụta nke netwọkụ mmekọrịta na-agbanwe agbanwe nwere ike ịchụpụ ma nweghachi ngwa ngwa, na-enweta ọtụtụ ume, mee ihe n’eji ike di elu, merie ihe ekike ọdịnala site na ike dị elu na ike siri ike nke nsogbu siri ike.
Egosipụtara nkwụsi ike ya na nguzogide mmetụta nke ọkụ ka ndị a: na ọnọdụ okpomọkụ si -120°C ka 150°C, ọnụọgụ nke ikuku mgbasa dị ala dịka 5 × 10-6 k-1. Nke ahụ bụ ikwu, ọ bụrụgodi na oke ikuku adịrị 100 ℃, ya mgbanwe mgbanwe dịkwa na 10,000 n'ime ise, naanị otu ụzọ n'ụzọ ise nke alloy aluminom ụgbọ elu, njinia eji eji otutu otutu a, dị nso na seramiiki. Ọzọkwa, akụrụngwa ya na akụkụ ya ka akwụsiri ike n'okpuru ule nyocha oke ure ugboro ugboro n'etiti 120 ℃ na -196 ℃.
N'otu oge ahụ, CNFP nwekwara nguzogide di elu, nnukwute mmerụ ahụ na arụmọrụ mgbali elu, nke a tụrụ anya na ọ ga - eji ya dochie anya alloy. Ihe nlere nke ihe omuma nke elu-elu nke ihe mgbochi nke hopkinson kewaputara na-egosi n’okpuru mmetụta di elu nke 28 m · s-1 (ọsọ ahụ na nke ụgbọ ala na-agba oke ọkụ), ọ na - egosi ike mpịakọta dị elu nke 1600MPa ma nwee ike itinye ike mmetụta ahụ ruru 387.5mj · m-3 n'ime 0.07 MS. Nke a bụ n'ihi na netwọko nanofiber dị okpukpu atọ dị na gburugburu ya mgbe ọ na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke njikọ hydrogen n'etiti ndị na-ahụ maka mmiri na-enwe nkewa ngwa ngwa na nwughari, nke nwere ike ịnabata ma gbanwee ntụgharị mmetụta mmetụta na ọkụ.
N'ihi ya, na-adigide ohuru eke nanofibers bionic mebere ihe, ihe ntinye gụnyere Gao Qiangren dị fechaa, nkwụsi ike dị elu na ujo oku, iguzogide mmetụta, njirimara dị mma dị ka nnwere onwe mmebi dị elu, echere na ọ ga - echekwa ujo dị uja na ihe eji edozi ahụ, ihe uwa, akụkụ akụrụngwa nkenke, ubi ndi ozo g’enwe olile anya sara mbara.
(isi mmalite: texti kwa ụbọchị onye ọrụ weibo)
Nkà na teknụzụ na usoro mmepe nke denim
Ọmụmụ ihe ọkachamara na-agwa gị ma enwere ike iji ọgwụ N95 mee ihe mgbe enwere ọgwụ nje? Kedu usoro nke mgbochi kacha mma?